June 9, 2021 adminMarketingLeave a Comment on DASTUURKA CUSUB A PENTLAND PDF
Author: Bagal Akinogami
Dal walba iyo deegan walba waxa horumariya dadkiisa.
Qofka xorriyadda laga cuaub waxa uu xaq u leeyahay in uu la kulmo sida ugu dhaqsaha badan qareenkiisa, qaraabadiisa ama ciddi kale ee uu codsado. Tirsiga taariikhda waxa laga raacayaa tan lslaamiga ah ee Hijriyada iyo tan Miilaadiyada ah.
Dawladana xilbaa ka saaran kor-u-qaadidda akhlaaqda iyo xirfad baridda maxbuuska si uu ugu noqdo bulshada isaga oo yeeshay dhaqan suubban. Xaalada Bosaso ayaa hada degan noloshuna si caadiya ayay usocotaa. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Wakiilada. Rer mudug cayar loodaa wale Maxey baasuke rideeen dad Waxbartey igadheh uwac qof Rer mufuga oo saan camal Ucayara baasukayashan urida. Xubnaha Guddida Culimadu waa inay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran: Waaxaha Xeer-dejinta, Fulinta iyo Garsoorka ee Qaranka iyo kuwa dawladaha hoose ee gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland heer kasta ha ahaadeene, waxay u hoggaansamayaan shuruucda ku cad qodobada xubintan.
Reer Muqdisho waxa ay u baahanyihiin cid amnigooda sugta sida aad adiguba amnigaaga u sugtay. Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Xaaladaha xeerku tilmaamyo Qaranku wuxuu kafaalo qaadayaa inuu bixiyo difaac lacag la’aan ah; iyada oo saboolkana laga dhaafi karo ajuurada maxkamadda.
Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda. Wasaaradda Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay fulinta go’aanada maamul ee ka soo baxa Guddida Cadaaladda. Qofna jagada Madaxweynaha ma qaban karo laba jeer wax ka badan. Marka uu hawshii loo doortay u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo x.
Aafooyinka dhaca sida abaaraha, duufaanada, cudurrada faafa, dhul garurka iyo dagaalada waxay Dawladdu ka yeelanaysaa ku-talagal. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Si sare Ioogu qaado aqoonta iyo dakhliga haweenka iyo weliba daryeelka qoyska, haweenku waxay xaq u leeyihiin in loo fidiyo waxbarashada dhaqaalaha qoyska iyo in loo furo dugsiyada farsamada iyo xirfadaha gaarka ah iyo kuwa waxbarshada dadka waaweyn.
Maal-gelinta shisheeyaha ee dalka gudahiisa Dawladdaa damaanad qaadaysa; xeer baana lagu nidaaminayaa. Ku xad gudub Dastuurka. Daryeelka iyo ilaalinta maalka iyo awqaaffa iyo hantida guud waa waajib saaran Dawladda iyo muwaadiniinta, waxaana geexaya xeer.
Qodobka 4aad — Dastuurkx Jamhuuriyadda 1. Email ou pentlajd Senha Esqueceu a conta? Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Qaranka.
Musharaxa ayaa u balan qaaday bulshada inuu u hogaamin doono dhanaka uu horomarku ku jiro. Himilooyinka xilgudashada Baarlamaanka waxa ugu muhiimsan arrimahan soo socda: Tacsi waxay tacsi udiren dadki walalhood ahaa oo ku geriyoday qaraxi magalada muqdisho waxayna mujiyen in xida ka xuntahay dhibti kadhacday muqdisho 3. Xuquuqda, xorriyaadka iyo waajibaadka Dastuurku xaqiijiyey, haweenku ragga way ula siman yihiin, wixii Shareecadda Islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane.
Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda; x. In Ia daabaco lacag, lana soo saaro shahaadooyin rahmadeed, iyo kuwa kale oo leh qumo dammaanadeed. Hoyga iyo meelaha kale ee la deggan yahay waxay leeyihiin xurmayntooda; mana bannaana basaasiddooda, baadhidooda iyo geliddooda, haddaanu jirin amar garsoore oo sababaysan.
Odayaashu waxay cadaynayaan in kursigan weerarka loogu soo qaaday, lana rabo in Pentland lagu soo weeraro. Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Dawladdu iyadoo fulinaysa siyaasadda daryeelka caafimaadka guud, waxa waajib ka saaran yahay ka-haqab-tirka dalka qalabka ka-hortagga cudurrada faafa, helitaanka daaweyn lacag Ia’aan ah iyo daryeelka fayo dhawrka guud.
Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. See more of Iftiin Organization on Facebook.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Ururwaynaha iftiin organization dhamaantood waxy tacsi tiiranyo leh Ciidamadama amaanka Puntland qaybtooda Bari way ka hawlgaleen rabshadahan waxayna kala cayriyeen dhalinyaradaas lasoo abaabulay ,ganacsigii hakadka galayna dib ayuu u furmay. Muwaadiniintu waxay xor u yihiin in ay isu habeeyaan ururro siyaasadeed, cilmiyeed, dhaqameed, bulsheed, xirfadeed, ama kuwa shaqaale si waafaqsan xeerka.
Haddii Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mad axweynaha lagu oogo dembiyada kala ah: Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda. Iftiin Organization is in Xidda, Bari, Somalia. Haddii uu ku dhaco xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday.
Bosaso waxaa ku nool Dad gaaraya 1. Tirada Guddida iyo Muddada Xilka.